NY FAMETRAHANA NY ROUTER DSL-2640U D-LINK EO AMBANY ROSTELECOM - NY ROUTER - 2019
Ny fametrahana ny router DSL-2640U D-Link eo ambany Rostelecom
Misy tranga izay rehefa aorian'ny famoahana ny ordinatera dia misy programa iray natsangana, ohatra, ny navigateur. Azo atao izany satria vokatry ny viriosy. Noho izany dia mety ho diso ny mpampiasa: manana tranokala izy ireo, saingy mbola misokatra amin'ny tranonkala miaraka amin'ny dokam-barotra ny antony. Ankoatra izay dia hodinihintsika ny antony mahatonga io fihetsika io, ary fantaro ny fomba hiatrehana izany.
Inona no tokony hataonao raha manokatra amin'ny dokam-barotra ny mpamaky?
Ny tranonkala browsers dia tsy manana safidy hanamorana ny autostart. Noho izany, ny hany antony mahatonga ny fidirana mivantana amin'ny tranonkala iray dia viriosy. Ary ny viriosy dia miasa ao amin'ny rafitra, ka manova ny marika sasany mitarika ho amin'ny fihetsika toy izany.
Ao amin'ny lahatsoratra dia hijery ny virosy izay afaka miova amin'ny rafitra sy ny fomba hamahana azy.
Atsaharo ny olana
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manamarina ny solosaina amin'ny viriosy mampiasa fitaovana fanampiana.
Misy ny adware sy viriosy mahazatra mifindra amin'ny ordinatera manontolo. Ny dokam-barotra toy ny AdwCleaner dia azo jerena sy esorina.
Raha te-hamoaka AdwCleaner ary ampiasao tanteraka, vakio ity lahatsoratra manaraka ity:
Ity scanner ity dia tsy mikaroka ny viriosy rehetra ao amin'ny ordinatera, fa ny fikarohana ihany koa ny adware izay tsy mahita ny antibiotika mahazatra. Satria ny viriosy toy izany dia tsy mampidi-doza mivantana amin'ny solosaina sy ny angon-drakitra eo aminy, fa miditra ao anaty navigateur sy izay rehetra mifandray amin'izany.
Rehefa vita ny fametrahana sy ny famokarana AdvKliner dia manao fanamarinana ordinatera.
1. Tsindrio "Scan".
2. aorian'ny fotoana fohy, dia haseho ny isan'ireo fandrahonana, tsindrio "Clear".
Ny solosaina dia hiverina ary ny Notepad dia hiseho avy hatrany aorian'ny famerenana azy. Ity rakitra ity dia mamaritra tatitra amin'ny antsipiriany momba ny fanadiovana tanteraka. Aorian'ny famakiana azy dia azonao atao akaiky ny varavarankely.
Ny famakiana tanteraka sy ny fiarovana ny ordinatera dia avy amin'ny antivirus. Ny fampiasana ny tranokalanay dia afaka misafidy sy misintona ny mpisolovava havanana amin'ny ordinateranao. Manaporofo tsara fandaharan'asa maimaimpoana toy izao
Antony tokony hametrahana ny navigateur amin'ny tenanao manokana
Mitranga izany na dia aorian'ny fanamarinana ny solosaina amin'ny rafitra aza, dia mety mbola misy ny autorun. Mianatra ny fomba hanesorana ity hadisoana ity isika.
Ao amin'ny autoload dia misy marika izay manokatra rakitra iray na ao amin'ny fikandrana asa dia misy asa iray manokatra ny rakitra rehefa manomboka ny solosaina. Diniho ny fomba hanitsiana ny toe-javatra.
1. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manokatra ny baiko. "Run"amin'ny fampiasana ny rakitra keyboard Win + R.
2. Eo amin'ny sary izay miseho eo amin'ny tsipika, dia manondro "msconfig".
3. Hanokatra varavarankely iray. "Configuration System", ary avy eo ao amin'ny fizarana "Startup" tsindrio "Open Task Manager".
4. aorian'ny fanombohana Task Manager fizarana misokatra "Startup".
Ireto misy singa ilaina amin'ny fanombohana, ary viral. Famakiana andalana "Publisher"Azonao atao ny mamaritra izay manomboka mila manomboka amin'ny fanombohana ary mamela azy ireo.
Ho zatra amin'ny autoruns ianao, ohatra, "Intel Corporation", "Google Inc" sy ny sisa. Ny lisitra dia mety ahitana ireo programa natsangan'ny viriosy. Azon'izy ireo atao ny mametraka sary vitsivitsy ao anaty boaty na fanokafana fisokafana mihitsy aza raha tsy misy ny fankatoavanao.
5. Ny singa virjiny dia mila nesorina tao amin'ny autorun fotsiny raha tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny download ary mifidiana "Disable".
Famoronana virosy amin'ny Task Scheduler
1. Mba hahitana "Task Scheduler" Ataovy ireto hetsika manaraka ireto:
• Mampiasà Win (Start) + R;
• Soraty ny "Taskschd.msc" ao amin'ny fikarohana.
2. Ao amin'ny tranokala misokatra dia mahita ny ordinatera "Task Scheduler Library" ary sokafy izany.
3. Ao amin'ny faritra afovoan'ny varavarankely, dia hita avokoa ny fizotry ny rafitra rehetra, izay averimberina isaky ny n-minitra. Ilaina ny mahita ny teny hoe "Internet", ary manaraka azy dia hisy taratasy (C, D, BB, sns), ohatra "InternetAA" (ho an'ny mpampiasa tsirairay amin'ny fomba samihafa).
4. Mba hijery fampahalalana momba ny dingana, tsy maintsy manokatra ny fananana ianao "Niteraka". Hivadika ny tranonkala. "Rehefa manomboka ny solosaina ianao".
5. Raha efa nahita ordinatera toy izany ianao dia mila esorina izany, fa alohan'izany dia tokony hesorinao ny rakitra virtoaly ao amin'ny disk. Mba hanaovana izany, mankanesa any "Actions" ary hisy ny lalana mankany amin'ny rakitra azo trandrahana.
6. Mila mahita izany isika amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny adiresy voalaza "Ny Computer".
7. Ankehitriny, tokony hijery ny toetra misy ny rakitra hitantsika isika.
8. Zava-dehibe ny hihaino tsara ny fikajiana. Raha any am-parany ny adiresin'ny tranonkala, dia rakitra maloto izany.
9. Tahiry toy izao rehefa mamadika ny solosaina ianao dia hanokatra ilay tranonkala amin'ny tranonkala iray. Noho izany, tsara kokoa ny manala izany avy hatrany.
10. Aorian'ny fanitsiana ny rakitra dia avereno at "Task Scheduler". Any ianao dia mila manazava ny dingana efa napetraka amin'ny alàlanao "Delete".
Dossier modificée modifié
Matetika ny mpampiasa dia manampy ampaham-potoana amin'ny rakitra fitehirizam-bokatra, izay mivantana mivantana amin'ny fisokafan'ny navigateur. Noho izany, mba hanafoanana ity adiresy filazam-baovaon'ny aterineto ity, dia mila manadio azy amin'ny fomba manokana ianao. Fomba tsotra toy izany, ary azonao ianarana ny fomba hanovana ny hôpitaly ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny rohy etsy ambany.
Vakio bebe kokoa: Manova ny rakitra tokana ao amin'ny Windows 10
Aorian'ny fanokafana ny rakitra, esory avy eo ny andalana fanampiny aorian'izay 127.0.0.1 localhost na :: 1 localhost. Ohatra iray amin'ny rakitra madio iray ihany no hita ao amin'ny rohy etsy ambony - tsara indrindra, tokony ho tahaka izao.
Olana amin'ny tranokala
Mba hanesorana ireo tsindrimandry sisa tavela ao amin'ny tranokala dia araho ny dingana etsy ambany. Amin'ity tranga ity, hampiasa Google Chrome (Google Chrome) izahay, saingy amin'ny browsers maro hafa dia afaka manao hetsika tahaka izany miaraka amin'ny vokatra mitovy.
1. Ny hetsika voalohany dia ny manala ireo fanitarana tsy ilaina ao amin'ny tranokala izay mety hametraka viriosy tsy misy fahalalana. Mba hanaovana izany, sokafy ao amin'ny Google Chrome "Menu" ary mankanesa any "Settings".
2. Eo ankavanan'ny pejy tranonkala dia mahita ny fizarana. "Fanitarana". Ny fanitarana tsy natsanganao dia tokony hesorina tsotra fotsiny amin'ny fipihana eo amin'ny saka-tsavoka manaraka eo.
Raha te hiditra amin'ny Google Chrome ianao, saingy tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany, vakio ity lahatsoratra ity:
lesona: Ahoana ny fametrahana fanitarana ao amin'ny Google Chrome
3. Miverena any "Settings" web browser ary mitady zavatra "Bika Aman 'endrika". Mba hametraha ny pejin-dehibe dia tsy maintsy kitika ianao "Change".
4. Hisy rafitra hiseho. "Home"izay ahafahanao manoratra ny pejy voafidy anao eny an-kianja "Pejy manaraka". Ohatra, milaza ny "//google.com".
5. Ao amin'ny pejy "Settings" mitady lohateny "Diniho".
6. Hanova ny motera fikarohana, kitiho ny bokotra eo akaikiny miaraka amin'ny lisitry ny milina fikarohana. Mifidiana tsiro.
7. Raha ny zava-misy, dia ilaina ny manolo ny sarimihetsika misy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny iray vaovao. Ilainao ny manala ny fehikibo ary mamorona iray vaovao. Mba hanaovana izany, mankanesa any:
Programa famandrihana (x86) Google Chrome Application
8. Avy eo dia misintona ny rakitra "chrome.exe" any amin'ny toerana ilainao ianao, ohatra, ho any amin'ny desktop. Fomba iray hafa hanamboarana fehintsoratra dia tsindrio eo ankavanana amin'ny fampiharana "chrome.exe" ary "Alefaso" any amin'ny "Desktop".
Mba hahafantarana ny anton'ny fanombohana Yandex. Browser, vakio ity lahatsoratra ity:
lesona: Ny antony mahatonga an'i Yandex Browser misokatra tsikelikely
Noho izany dia nijery ny fomba ahafahanao manala ny fahadisoana fanombohan'ny tranonkala sy ny antony maha-mety azy. Ary araka ny voalazan'ny efa voalaza, dia zava-dehibe ny habaka fampiasan'ny ordinatera ho an'ny fiarovana an-tsokosoko.